Man United oo ku dhow inay dhamaystirto heshiis cusub – Gool FM
Man United oo ku dhow inay dhamaystirto heshiis cusub
Dajiye June 21, 2022
(Manchester) 21 Juun 2022. Tababaraha reer Holland Erik ten Hag ayaa ku dhow inuu heshiis cusub u dhmmeystiro kooxdiisa cusub ee Manchester United.
Sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska The Sun ee ka soo baxa Ingiriiska, Manchester United.ayaa ku dhow inay dhamaystirto saxiixa xiddiga reer Brazil Antony oo ay kala soo wareegayaan Ajax Amsterdam, iyada oo heshiiskiisa uu ku kacayo 40 million pounds
Warbixintu waxay tilmaantay in madaxda Manchester United la filayo inay u safraan Amsterdam si ay u dhamaystiraan heshiiska xiddiga reer Brazil, kaasoo ay horrey uga soo wada shaqeeyeen Erik ten Hag kooxda Ajax.
Wargeyska Ingiriiska ayaa sheegay in Antony uu ixtiraam weyn u hayay tababare Ten Hag, markii lagu dhawaaqay inuu ka tagayo Ajax, wuxuu u soo diray fariin uu ku yiri: “Waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo wax walba oo aad i baratay.”
Warbixinta ayaa xaqiijisay in Ten Hag uu doonayo inuu la saxiixdo ciyaaryahankiisii ​​hore si uu u bilaabo dib u dhiska Red Devils oo xiddigo da’ayar ah, si uu u abuuro koox tartan ah oo awood u leh inay wax ka bedel ku sameyso horyaalka Ingiriiska.
Anthony waa 22 jir, wuxuuna ku fiican yahay inuu ka ciyaaro booska garabka midig, isaga oo u dhaqaaqay Ajax Amsterdam 2020, wuxuuna kaga soo biiray naadiga Sao Paulo ee dalka Brazil.
Xiddiga reer Brazil ayaa u ciyaaray kooxda Ajax Amsterdam, 78 kulan tartamada oo dhan ah, isaga oo u dhaliyay 22 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 20 gool kale.
RASMI: 19 sano kaddib Bruce Buck oo ka tagay shaqada Guddoomiye ee Chelsea
Guardiola oo shaaciyay go’aankiisa kaga aadan wararka la xiriira in Bernardo Silva uu ka tagayo Man City